Lọghachikwute ‘Onye Ọzụzụ Atụrụ na Onye Nlekọta nke Mkpụrụ Obi Gị’ (1 Pita 2:25)
GỤỌ NKE Abua Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Basque Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Na broshọ a, anyị ekwuola ihe ụfọdụ nwere ike ime ka o siere mmadụ ike ịlọghachikwute Jehova. Ọ̀ bụ ụdị ihe ndị ahụ na-emekwa ka o siere gịnwa ike ịlọghachikwute Jehova? Ọ bụrụ na ọ bụ ụdị ihe ndị ahụ, broshọ a ga-enyere gị aka. Ọtụtụ ndị fere Chineke n’oge ochie nakwa ọtụtụ ndị na-efe ya taa nwechara ihe ndị mere ka o siere ha ike ịlọghachikwute Jehova. Ma, Jehova nyeere ha aka imeri ihe ndị ahụ. Ọ ga-enyekwara gịnwa aka.
Jehova ga-enyere gị aka ná mbọ ị na-agba ịlọghachikwute ya
KA OBI sie gị ike na Jehova ga-enyere gị aka ná mbọ ị na-agba ịlọghachikwute ya. Ọ ga-enyere gị aka ịkwụsị ịna-echegbu onwe gị, ịkwụsị ịna-ewe iwe maka ihe nwanna gị mere gị. Ọ ga-enyekwara gị aka ka obi gị kwụsị ịna-ama gị ikpe. O nweziri ike ibidokwa gụwa gị agụụ isoro ụmụnna gị fewe Jehova. E nwere ike ikwu na otú a ọ dị gị ka ọ dị ụfọdụ Ndị Kraịst oge mbụ. Pita onyeozi gwara ha, sị: “Unu dị ka atụrụ ndị na-akpafu akpafu; ma ugbu a, unu alaghachikwuruwo onye ọzụzụ atụrụ na onye nlekọta nke mkpụrụ obi unu.”—1 Pita 2:25.
O doro anya na ịlọghachikwute Jehova bụ ihe kacha mma i kwesịrị ime. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? Ọ bụ n’ihi na ọ ga-eme ka obi Jehova ṅụrịa. (Ilu 27:11) Ị manụ na ihe anyị mere nwere ike iwute Jehova ma ọ bụkwanụ mee ya obi ụtọ. Ma, Jehova anaghị amanye anyị ịhụ ya n’anya na ife ya. (Diuterọnọmi 30:19, 20) Otu ọkà mmụta Baịbụl kwuru, sị: “Obi mmadụ dị ka ọnụ ụzọ na-enweghị onye ọzọ ga-emegheli ya. Ọ bụ naanị onye nwe ya ga-emegheli ya.” Ma, mmadụ nwere ike ikpebi imeghe obi ya, jiri obi ya niile na-efe Jehova n’ihi na ọ hụrụ ya n’anya. Anyị mee otú ahụ, ọ ga-egosi na anyị dịnyeere Jehova, obi ga-abụkwa Jehova sọ aṅụrị. Nke bụ́ eziokwu bụ na o nweghị ihe a ga-eji tụnyere obi ụtọ anyị ga-enwe ma anyị na-efe Jehova.—Ọrụ Ndịozi 20:35; Mkpughe 4:11.
Ihe ọzọ bụ na ị maliteghachi iso ụmụnna gị na-efe Chineke, obi ga-eru gị ala n’ihi na i gboola mkpa ime mmụọ gị. (Matiu 5:3) Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? Ọ bụ n’ihi na ọtụtụ ndị nọ n’ebe dị iche iche n’ụwa na-ajụ, sị, ‘Oleedị isi ndụ a anyị dị?’ Ọ na-agụsi ha agụụ ike ịmata azịza ajụjụ ndị ha na-ajụ gbasara ihe Chineke bu n’obi kee anyị. Ihe mere o ji na-agụ ndị mmadụ agụụ ịmata ihe ndị a bụ n’ihi na ọ bụ otú Jehova si kee anyị. O kere anyị ka anyị na-efe ya, na-enwekwa obi ụtọ na anyị na-efe ya. O nweghị obi ụtọ karịrị obi ụtọ anyị ga-enwe n’ihi na anyị ma na anyị na-efe Jehova maka na anyị hụrụ ya n’anya.—Abụ Ọma 63:1-5.
N’eziokwu, Jehova chọrọ ka ị lọghachikwute ya. Olee ihe gosiri na ọ chọrọ ka ị lọghachikwute ya? Chebagodịrị ihe a echiche: Anyị kpesiri ekpere ike tupu anyị edee ihe ndị anyị dere na broshọ a. O nwere ike ịbụ okenye ma ọ bụ nwanna ọzọ nyere gị ya, gị agụọ ya, meekwa ihe ndị e kwuru na ya. Ihe a niile gosiri na Jehova echefubeghị gị. Kama, o ji nwayọọ na-adọghachi gị n’ebe ọ nọ.—Jọn 6:44.
Obi na-eru anyị ala ma anyị ghọta na Jehova anaghị echefu ndị ohu ya kpafuru akpafu. Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Donna ghọtara na Jehova anaghị eme otú ahụ. Ọ sịrị: “Eji m nwayọọ nwayọọ hapụ ọgbakọ. Ma, Abụ Ọma 139:23, 24 anaghị apụ m apụ n’obi. Ebe ahụ sịrị: ‘Chineke, biko, nyochaa m, marakwa obi m. Nyochaa m, marakwa nchegbu m, lee ma m̀ na-eje ije n’ụzọ ọ bụla nke na-eweta ihe mgbu, na-edukwa m n’ụzọ nke mgbe ebighị ebi.’ Ama m nke ọma na o nweghị ihe jikọrọ mụ na ndị ụwa. Amakwa m na ọ bụ n’ọgbakọ Jehova ka m kwesịrị ịnọ. M bịara chọpụta na Jehova ahapụbeghị m. Naanị ihe m kwesịrị ime bụ ịgbalị lọghachikwute ya. Obi dịkwa m ụtọ na m lọghachikwutere ya.”
“M bịara chọpụta na Jehova ahapụbeghị m. Naanị ihe m kwesịrị ime bụ ịgbalị lọghachikwute ya”
Ekpere anyị bụ ka ị lọghachikwute Jehova ma malitekwa nwewe “ọṅụ Jehova” na-enye. (Nehemaya 8:10) Ị gaghị akwa m̀ makwaara na ị lọghachikwutere Jehova.
Azịza Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị Banyere Ịlọghachikwute Jehova
OLEE IHE MBỤ M GA-EME?
Onye si n’ọrịa na-agbake na-eji nwayọọ nwayọọ bidokwa mewe ihe ndị ọ na-emebu. Otú ahụ ka ị ga-esikwa jiri nwayọọ nwayọọ na-amụ Okwu Chineke kwa ụbọchị ka okwukwe gị nwee ike isighachi ike. Echekwala na ị ga-emecha ihe niile otu mgbe. I nwere ike iji nkeji ole na ole gụọ Baịbụl ma ọ bụkwanụ gere nke a gụrụ agụ. I nwekwara ike ịmụ otu n’ime akwụkwọ anyị, lee ihe ndị dị na jw.org/ig, ma ọ bụkwanụ lee otu n’ime ihe ndị dị na tv.jw.org. Gbalịakwa gaa ọmụmụ ihe ozugbo. Ma, ihe kachanụ ị ga-eme bụ ịrịọ Jehova n’ekpere ka o nyere gị aka. ‘Tụkwasị ya nchegbu gị niile, n’ihi na ihe banyere gị na-emetụ ya n’obi.’—1 Pita 5:7.
Otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Eeva sịrị: “Mgbe m lara azụ n’ofufe Jehova, ihere onwe m bịara na-eme m. Ihere anaghịdị ekwe m kpee ekpere. Ma, m mechara kata obi kpee ekpere. Mụ na otu okenye hụkwara, ya emesie m obi ike na Jehova ahapụbeghị m, na ọ ka chọrọ ka m lọghachikwute ya. Okenye ahụ gbaziri m ume ka m bido gụwa Baịbụl kwa ụbọchị. Mgbe m bidoro gụwa Baịbụl, m bịara kata obi bịawa ọmụmụ ihe. Obere oge, m bidokwara gawa ozi ọma. Obi bụ m sọ aṅụrị na Jehova ahapụghị m.”
ỤMỤNNA HÀ GA-ANABATAKWA M?
Ka obi sie gị ike na ụmụnna ga-anabata gị. Ha agaghị abịa katọwa gị ma ọ bụ mawa gị ikpe. Kama, ha ga-egosi gị na ha hụrụ gị n’anya, meekwa ihe ọ bụla ha nwere ike ime iji gbaa gị ume.—Ndị Hibru 10:24, 25.
Otu nwanna aha ya bụ Javier sịrị: “Ihere nọ na-eme m ịga ọmụmụ ihe. M nọ na-eche otú ụmụnna ga-esi emeso m. Mgbe m mechara gaa ọmụmụ ihe, otu nwanna nwaanyị nọ́ mgbe m hapụrụ ọgbakọ afọ iri atọ gara aga sịrị m: ‘Nwa m, nnọọ.’ Ihe ahụ ọ gwara m ruru m n’obi. N’eziokwu, alọghachila m ebe m kwesịrị ịnọ.”
Otu nwanna aha ya bụ Marco sịrị: “Agara m ọmụmụ ihe ma nọrọ n’oche azụ ka a ghara inwe onye ga-ahụ m. Ma ọtụtụ ndị hụrụ m, matakwa m n’ihi na ha ma mgbe m na-abịabu ọmụmụ ihe mgbe m dị ntakịrị. Ha kelere m ma makụsie m ike. Ihe a mere ka obi ruo m nnọọ ala. Ọ dị m nnọọ otú ahụ ọ na-adị onye gachara ihe lọta n’ụlọ ya.”
OLEE OTÚ NDỊ OKENYE GA-ESI ENYERE M AKA?
Ndị okenye ga-eji obiọma nabata gị. Ha ga-aja gị mma maka igosi na ị chọrọ inwetaghachi “ịhụnanya ahụ i nwere na mbụ.” (Mkpughe 2:4) Ha ga-eji “mmụọ dị nwayọọ” nyere gị aka imezi ihe ọ bụla i mejọrọ. (Ndị Galeshia 6:1; Ilu 28:13) Ndị okenye nwere ike ịhazi ka otu nwanna na-abịa amụrụ gị ihe. Unu nwere ike iji akwụkwọ Bịaruo Jehova Nso ma ọ bụkwanụ “Nọrọnụ n’Ịhụnanya Chineke” na-amụ ya. Ka obi sie gị ike na ndị okenye ga-eme ka obi ruo gị ala. Ha ga-enyekwara gị aka n’ihe ọ bụla ị na-eme iji lọghachikwute Jehova.—Aịzaya 32:1, 2.
Otu nwanna aha ya bụ Victor sịrị: “N’ime afọ asatọ m kwụsịrị ịga ọmụmụ ihe, ndị okenye akwụsịghị ịna-abịa eleta m. Otu ụbọchị, otu okenye gosiri m foto ụfọdụ mụ na ya sere. Foto ndị ahụ mere ka m cheta ọtụtụ ihe mere n’oge gara aga. Ọ bịara gụwakwa m agụụ ịna-enwe ụdị obi ụtọ m na-enwebu mgbe m na-efe Jehova. Ndị okenye ji obiọma nyere m aka ibidoghachi fewe Jehova.”
“Ọ Ga-eme Ka I Sie Ike”
E nwere ọtụtụ ọmarịcha abụ ndị dị n’akwụkwọ abụ anyị bụ́ Bụkuo Jehova Abụ. Abụ ndị a nwere ike ịkasi gị obi ma nyere gị aka ná mbọ ị na-agba ibidokwa fewe Jehova otú i sibu efe ya. Iji maa atụ, legodị mkpụrụ okwu ndị dị n’abụ nke 60. Isiokwu ya bụ “Ọ Ga-eme Ka I Sie Ike.” O si na 1 Pita 5:10.
Ọ d’ihe mere Jaa ji zi gị eziokwu ya,
Mee k’i si n’ọchịchịrị baa n’ìhè.
Ọ hụrụ na ọ n’agụ gị agụụ n’obi
Ịchọ ya na ime ihe zir’ezi.
I kwere ya nkwa im’uche ya;
Ọ g’anọgide n’enyere gị aka.
Chineke nyere Ọkpara ya n’ihi gị;
Ọ chọrọ k’ihe n’agaziri gị.
Eb’O nyere Ọkpara y’ọ hụrụ n’anya,
K’obi sie g’ike n’ọ g’enye g’ike.
Ọ gaghị echefu okwukwe gị;
Ọ ga n’elekọta ndị ya niile.
Chineke ji ọbara Kraịst mee k’ị bụrụ nke ya.
Ọ g’eme k’i si’ike, mee k’i guzosi’ike.
Ọ g’edu ma chebe gị, dị k’ọ n’eme kemgbe.
Ọ bụrụ na ị chọrọ igere abụ a nke e ji ọnụ bụọ n’asụsụ Bekee nakwa abụ Alaeze ndị ọzọ e ji ọnụ bụọ, gaa n’ebe e dere PUBLICATIONS pịa ebe e dere MUSIC.
Ha Na-abịa Akụ Egwú